Database မြန်မာဘာသာ သင်ခန်းစာများ - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် » ..:: ကွန်ပျူတာနယ်ပယ် ::.. » Web Development Section -2» Databases » E-books များ
Database မြန်မာဘာသာ သင်ခန်းစာများ
26-02-2008, 03:40 AM
Database မြန်မာဘာသာ သင်ခန်းစာများကို ဒီနေရာလေးမှာ မျှဝေပေးသွားပါမယ် ...........မြန်မာလိုရေးထားတာဆိုတော့ လေ့လာလိုတဲ့ သူတွေအတွက် အဆင်ပြေမယ်လို့ ထင်ပါတယ် ...သင်ခန်းစာ တစ်ခုချင်းစီ တင်ပေးသွားပါမယ် .....ကျန်တဲ့ ညီကိုမောင်နှမများလဲ Database နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ်များရှိမယ်ဆိုရင် ဒီနေရာလေးမှာ မျှဝေပေးလို့ရပါတယ် .......
သင်ခန်းစာ ( ၁ )
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ ကမ်းသာယာ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စစ်တွေသားချေ, စန်းမြို့, နောင် နောင်, မောင်ဘိုတောက်, blackNwhite, LaMike, waterpeople
26-02-2008, 03:42 AM
ပြန်စာ - Database မြန်မာဘာသာ သင်ခန်းစာများ
သင်ခန်းစာ ( ၂ )
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ ကမ်းသာယာ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စစ်တွေသားချေ, စန်းမြို့, blackNwhite, waterpeople
သင်ခန်းစာ ( ၃ )
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ ကမ်းသာယာ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စစ်တွေသားချေ, စန်းမြို့, မောင်ကို, ကြည်နိုင်, blackNwhite
Originally Posted by ကမ်းသာယာ
သင်ခန်းစာ ( ၃ ) လင့်ခ် အလုပ်မလုပ်တော့ဘူး ၊ ကျန်တာ အားလုံး အိုကေတယ် ။
ပြန်တင်ပေးလို့ ရမလား အစ်ကိုရေ ...
စန်းမြို့, မောင်ကို, ကြည်နိုင်
ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ..အဆင်ပြေပါစေ ..
ဇော်ရဲပိုင်, မောင်ကို, blackNwhite, moe_poung
26-02-2008, 03:43 AM
သင်ခန်းစာ ( ၄ )
စစ်တွေသားချေ, စန်းမြို့, ကြည်နိုင်, blackNwhite
သင်ခန်းစာ ( ၅ )
26-02-2008, 03:44 AM
သင်ခန်းစာ ( ၆ )
26-02-2008, 03:45 AM
သင်ခန်းစာ ( ၇ )
26-02-2008, 03:46 AM
သင်ခန်းစာ ( ၈ )
စန်းမြို့, ကြည်နိုင်, blackNwhite
26-02-2008, 03:47 AM
သင်ခန်းစာ ( ၉ )
သင်ခန်းစာ ( ၁၀ )
26-02-2008, 03:51 AM
သင်ခန်းစား ( ၁၁ )
သင်ခန်းစာ ( ၁၂ )
စန်းမြို့, မောင်ကို, ကြည်နိုင်, blackNwhite
26-02-2008, 03:52 AM
သင်ခန်းစာ ( ၁၃ )
စစ်တွေသားချေ, မောင်ကို, ကြည်နိုင်, blackNwhite
သင်ခန်းစာ ( ၁၄ )
08-07-2008, 02:16 PM
ပို့စ်5ခုအတွက် 15 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Find More Posts by mmzaww
အစ်ကိုရေးတစ်ခြား link ရှိရင်တင်ပေးပါဦးဗျာ........တာတာတို့စီမှာ မရဘူးဖြစ်နေတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ.........
Your system policy has denied access to the requested UR ဖြစ်နေလို့ပါဗျာ......တာတာစိတ်ညစ်နေတယ်ဗျာ.....
ပို့စ် 32 ခုအတွက် 122 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကိုကမ်းသာယာရေ . . . . .
လင့်တွေက သင်ခန်းစာ ( ၃ ) ကလွဲပြီး အလုပ်မလုပ်ကြတော့ဘူး . . . . . .
ပြန်တင်ပေးလို့အဆင်ပြေမလားဟင်. . . . . .
မြန်မာလိုရေးထားတာဆိုတော့ လိုချင်လို့ပါ . . .
Find More Posts by မြတ်ဘုန်းမို
ကမ်းသာယာ ရဲ့ ဘလော့ဂ်ကနေ သွားယူပြီးပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Last edited by tu tu; 25-04-2014 at 09:45 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 34 ဦးတို့မှ tu tu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုဦး, စစ်တွေသားချေ, စန်းမြို့, ဇာနည်မောင်, ဖန်နေ၀န်း, မွန်သန့်, ရုပ်ဆိုး, လင်းလက်တာရာ, လမ်းပြကြယ်, သန့်ဇင်ဌေး, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, ဇော်ဘုန်းလှိုင်, ဇော်ရဲပိုင်, ယောနသံ, ကြည်နိုင်, ကြယ်တာရာ, ​ကျော်​ရဲထွန်း၂, abalone, aungbanthar, blackNwhite, bonge, hanhtun, LaMike, linlinaung, moe_poung, myomyatthu, naung252, pannuko, phyomyintthein, PoeHapGyi, sAnDViper, tapaung, Zaw Min Han, ^Dragon^
file expired တဲ့....အစ်မလုပ်ပါဦး.......................ပြန်တင်ပေးပါဦး...
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Apr 2014
ိDownload လုပ်လို့ရပြီး ဖွင်.လိုမရဘူးဘူးဖြစ်နေတယ်ရှင့်
Find More Posts by ကြည်နိုင်
15-10-2008, 12:13 PM
ပို့စ် 123 ခုအတွက် 345 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အစ်မတုတုအဲလို လုပ်ပေးမယ်လို့သိလို့ လင့်ခ်တွေကို အရင်ဆုံးမဒေါင်းခင် အစ်မတုတုများ လင့်ခ်တွေကိုပေါင်းပြီး တစ်ခုတည်း တင်ပေးထားမလားလို့ရှာကြည့်တာ... အဟဲ... ထင်တဲ့အတိုင်းပဲ...အောက်ဆုံးကလင့်ပဲယူတော့မယ်နော်....
မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် ပေးကမ်းလျှင် အမြတ်ရဖို့ အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ခြင်းတစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ မျှော်လင့်ချက်မပါဘဲ ပေးကမ်းလျှင် ကိလေသာကုန်ရာ နိဗ္ဗာန်ရဖို့ ဒါနပါရမီ ဖြည့်ဆည်းခြင်းဖြစ်သည်။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ junemoe အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by junemoe
ပို့စ် 10 ခုအတွက် 44 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Hello Thu Thu,
While extracting the database_myanmar_.rar file, Diagnostic Message box is appeared. How can I solve that error. Pls advice me. Thanksalot.
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ airnnebrown အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by airnnebrown
Message က ဘယ်လိုပြတာလည်း မသိဘူးညီမရေ...
Password မှားတယ် ပြောတာလား။
Password ကို copy ကူးမထည့်ဘဲ ရိုက်ထည့်ကြည့်ပါ။
ဒါမှမဟုတ် ဒေါင်းတုန်းက file size မပြည့်ရင်လည်း ဖြည်လို့မရ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
size ပြည့်၊ မပြည့် တစ်ချက်ကြည့်ပါ။
လေးလေးနွယ်, ကြည်နိုင်, airnnebrown, bonge
မသူသူေ၇ ဒေါင်းလုပ်က အိုကေသွားပြီ။
အဆင်ပြေမယ်ဆို၇င် SQL Database မြန်မာဘာသာ သင်ခန်းစာများ ရှိ၇င် ယူချင်ပါတယ်။
09-05-2009, 12:53 PM
အစ်မရေ အိုင်ဖိုင်နဲ့ပြန်တင်ပေးပါ့လားဗျာ။ ကျွန်တော်ကအိုင်ဖိုင်နဲ့မှအဆင်ပြေလို့ပါ
30-11-2009, 09:15 AM
သင်ပေးတဲ့သူရော ပြန်တင်ပေးတဲ့ သူကော အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Find More Posts by zoard
ပို့စ်2ခုအတွက် 11 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျေးဇူးပဲဗျာ။ ဒေါင်းလော့ခ်လုပ်သွားပြီနော်။ အခုလိုတင်ပေးတာအရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Find More Posts by ညီညီခိုင်
database connectivity with MS-Access shadeboy ဆွေးနွေးချက်များ 10 05-01-2014 10:26 PM
The Database Hacker's Handbook kothu E-books များ728-12-2012 08:40 AM
Database Design Ebook မောင်တေဇာဝင်း E-books များ914-12-2011 11:18 AM
Database System Ebooks tu tu E-books များ 8 21-01-2010 10:41 AM
ဖိုရမ်၏ ပင်မအချိန်သည် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် +6.5 ဖြစ်သည်။ဒေသစံတော်ချိန် 03:23 AM